Mufananidzo naAlex Castro / Iyo Verge Microsoft iri kupedzisa yayo Xbox Game Yekufambisa app ye Windows MaPC, ayo anosanganisira kuwana kumitambo yekushambadzira kubva kukambani xCloud sevhisi. Isu takakwanisa kuwana mukana kune yazvino vhezheni yeXbox Game Yekufambisa app ye Windows, isingazivikanwe uye isina kuburitswa app. Kana yaburitswa, iyo app icharega Windows users stream games from… [Verenga zvakawanda ...] nezveMicrosoft isina kuburitswa Xbox Game Streaming app ye Windows inosanganisira kubata bata, gyro, uye zvimwe
Yekutora chishandiso ndeyeMicrosoft Windows Screenshot software iri kuiswa mukati Windows Vista uye neshanduro dzese dzakazotevera. Iyo Screenshot utility yakatanga kuburitswa munaNovember 2002 kureva makore gumi nemasere apfuura. Saka, iyi isoftware yekare asi vanhu vazhinji vachiri kusazviziva kana kusaziva mashandisiro ayo. Iyo software inoshandiswa kutora screenshots yechero… [Verenga zvakawanda ...] nezve Kubvuta Turu - Dzese Mapfupi Ekuishandisa
Gadzirisa: Yako PC Haigone Project Kune Imwe Screen
Windows inoshanda sisitimu inotsigira akawanda monitors kunze kwebhokisi. Iwe unongofanirwa kubatanidza kunze kwekutarisa (s), tinya iyo Windows logo + P makiyi, uye wobva wasarudza izvo zviripo zvekutanga kuti utange kushandisa yekunze yekutarisa (s) seyako yekutanga kana kuwedzerwa kuratidzwa. Ndichiri kuyedza kuratidza kune wechipiri mutariri, mu Windows 10, unogona kuwana "PC yako haigone kuratidza kune imwe… [Verenga zvakawanda ...] nezve Fix: Yako PC Haigone Project Kune Imwe Screen